State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs Daw Aung San Suu Kyi received Senior Director for Asian Affairs at the White House National Security Council Mr. Matt Pottinger – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs Daw Aung San Suu Kyi received Senior Director for Asian Affairs at the White House National Security Council Mr. Matt Pottinger
State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs Daw Aung San Suu Kyi received Senior Director for Asian Affairs at the White House National Security Council Mr. Matt Pottinger at 15:15hrs on 15th June 2018 at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw. During the meeting, matters relating to the bilateral relations between Myanmar and the United States, peace process and the situation in the Rakhine State were discussed.
Dated. 15 June 2018
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ အိမ်ဖြူတော်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ၊ အာရှရေးရာ အကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Matt Pottinger အား ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့၊ (၁၅:၁၅) နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်။